﻿ किन बन्धक भए सांसदसहितको टोली बाँकेमा ?
किन बन्धक भए सांसदसहितको टोली बाँकेमा ?
आइतबार ०५, जेठ २०७६
नेपालगन्ज । चरेस सहित समातिएका व्यापारीको पक्षमा उत्रिएका स्थानीयको कारण बाँकेमा शुक्रबार राती तनाव सृजना भएको छ ।
समातिएका व्यापारी देवीदिन विकको रिहाइको माग गर्दै स्थानीयले इलाका प्रहरी कार्यालय भोजभगवानपुरमा तोडफोड गरेका छन् । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले राति ९ बजेसम्म ६५ राउण्ड हवाइ फायर गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
झडपका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका दुई र नेपाल प्रहरीका एक जवान घाइते भएका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश सापकोटाका अनुसार नरैनापुर–४ को हाटबजारमा कपडा बेच्न आएका भारतीय नागरिक देवीदिन विश्वकर्मालाई प्रहरीले साँझ ५ बजे पाँच किलो चरेशसहित पक्राउ गरेको थियो ।
आक्रोशित स्थानीयले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेर नेपालगन्ज फर्कँदै गरेकी बाँकेको क्षेत्र नं. १ ‘क’ बाट निर्वाचित प्रदेश ५ की सांसद कृष्णा केसी ‘नमूना’सहित पत्रकारको टोलीलाई पनि ६ बजेतिर स्थानीयले ४ घण्टा नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
नेपालगन्जबाट राति १० बजेतिर थप प्रहरी परिचालन गरी शनिबार सांसद र पत्रकार टोलीलाई बिहान २ बजे नेपालगन्ज ल्याइएको थियो । चरेशसहित पक्राउ गरिएका बिकलाई पनि नेपालगन्जमा ल्याएर कानुनी कारबाही सुरु गरिएको बाँके प्रहरीले जनाएको छ ।